အကောင်းဆုံး အလှကုန် အဆင့် သဘာဝ အော်ဂဲနစ် အပင် ထုတ်ယူ သံလွင်/သကြား ကြံ မှ ရရှိသော CAS 111-01-3 99% သန့်စင်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက် Squalane ဆီ ထုတ်လုပ်သူ နှင့် စက်ရုံ |Yeme
အလှကုန်အဆင့် သဘာဝအော်ဂဲနစ်အပင်မှထုတ်ယူသော သံလွင်/သကြားကြံ CAS 111-01-3 99% သန့်စင်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက် Squalane ဆီ
အရည်ပျော်မှတ်: -38 ℃
ဆူမှတ်: 470.27 ℃
SQUALANE အလှကုန်ဖော်မြူလာများတွင် အသုံးပြုသည့် တန်ဖိုးအရှိဆုံး သဘာဝ emollients များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စျေးကွက်တွင်ရှိသော သံလွင်ဆီ၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတွင် အသုံးပြုသော အနံ့ဆိုးထွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်မှ ထွက်ပေါ်လာသော ဟင်းသီးဟင်းရွက် squalane ဖြစ်သည်။Squalane သည် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့်ခရင်မ်၊ နှုတ်ခမ်းနီနှင့် နေရောင်ကာခရင်မ်တို့ကဲ့သို့သော အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များတွင် အသုံးပြုသည့် အစိုဓာတ်ထိန်းပစ္စည်းဖြစ်သည်။
Squalane နှင့် Squalene
Squalane သည် squalene ၏ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး squalene ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို စုံလင်စွာ အမွေဆက်ခံပါသည်။၎င်းသည် အရေပြားနှင့် လိုက်ဖက်သော၊ အစိုဓာတ်နှင့် antioxidant ဖြစ်သည်။ဆီဘမ်နှင့်ဆင်တူသည်၊ ၎င်းသည် အရေပြားအတွင်းသို့ ရောစပ်ပြီး အရေပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အကာအကွယ်ဖလင်တစ်ခု ဖန်တီးရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည် squalene ထက် ပိုမိုတည်ငြိမ်သည်၊ သိမ်းဆည်းရလွယ်ကူရုံသာမက အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်လည်း လိုက်ဖက်ပါသည်။
☑ အရောင်မဲ့၊ အရသာမရှိသော၊ အဆိပ်မရှိသော၊ တောက်ပပြီး ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သည်။
☑ စိုစွတ်စေသော်လည်း အဆီပြန်ခြင်းမရှိပါ။
☑ အထူးကောင်းမွန်သော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုနှင့် အပူတည်ငြိမ်မှု၊
☑ ကျယ်ပြန့်သော pH အကွာအဝေးတွင် ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။
☑ ၎င်းသည် တွင်းထွက်ဆီနှင့် ကောင်းစွာလိုက်ဖက်မှုရှိပြီး စောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များ၏ ကုန်ကြမ်းအများစု၊
1. အရေပြားနှင့် ဆီဘမ်ကြား ဟန်ချက်ညီအောင် ကူညီပေးပြီး သဘာဝအတိုင်း အကာအကွယ် ဖလင်အဖြစ် ထိထိရောက်ရောက် ပြုပြင်ပေးပါသည်။
2. Squalane သည် အရေပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ သဘာဝအတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ် လူ့ဆီဘမ်အမြှေးပါးနှင့် ပေါင်းစည်းနိုင်သည့် ခိုင်မာသောဆက်စပ်မှုရှိသော လူ့ဆီဘမ်နှင့် အနီးစပ်ဆုံး lipid တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
3. Squalane သည် အရေပြား lipid များ၏ peroxidation ကို ဟန့်တားနိုင်ပြီး အရေပြားအတွင်းသို့ ထိရောက်စွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အရေပြားအိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နှောင့်နှေးစေကာ ကလာစမာကို ဖယ်ရှားပေးသည့် ထင်ရှားသော ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည့် အရေပြား basal ဆဲလ်များ ပေါက်ပွားမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
4.Squalane သည် အရေပြား ချွေးပေါက်များကို ပွင့်စေပြီး သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းမွန်စေကာ ဆဲလ်များ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ပျက်စီးနေသော ဆဲလ်များကို ပြုပြင်ပေးသည်။
ယခင်- အလှကုန်အဆင့် N- (2-Hydroxyethyl) -Urea Hydroxyethyl Urea 2078-71-9 အီမိုလီယန့်
နောက်တစ်ခု: အရည်အသွေးမြင့် ဆန်ဖွဲနုထုတ်ယူမှု CAS 100403-19-8 5%-70% HPLC Konjac Ceramides Powder အများအပြားစျေးနှုန်း
အော်ဂဲနစ် Squalane ဆီ
Squalane Squalane ဆီ
အလှကုန်အဆင့် D-Pathenol CAS No 81-13-0 Dl-Pan...
အလှကုန်အဆင့် N- (2-Hydroxyethyl) -Urea Hydrox...
အလှကုန် အဆင့် သဘာဝ အော်ဂဲနစ် အပင် ထုတ်ယူမှု O...
စက်ရုံသုံး ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ CAS နံပါတ် 107-88...
လျင်မြန်စွာ ပို့ဆောင်ပေးပြီး သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော အလှကုန်ကြမ်း...
Food Grade Pharmaceutical Grade Cosmetic Indust...
Glycerol 99.5% တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ စက်မှုဂ...
အရည်အသွေးမြင့် CAS 9067-32-7 Sodium Hyaluronate P...
အရည်အသွေးမြင့် အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကြမ်း CAS 97-59-6...